UVan Gogh Museum upapasha uninzi lwepeyinti yinkosi kwifomathi ye-HD | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Imyuziyam yaseVan Gogh ipapasha uninzi lwemizobo yenkosi kunye nemizobo kwifomathi yedijithali ye-HD
La igalelo elikhulu olwenziwa ziimyuziyam ezininzi kwihlabathi liphela ukuba nabani na akhuphele okanye axabise iinkcukacha zemisebenzi yeklasi yokupeyinta kwikhompyuter, ithebhulethi okanye i-smartphone, iyaphawuleka.
Namhlanje lusuku lokwazi ukuba iMyuziyam yaseVan Gogh ipapashe kwiwebhusayithi yayo uninzi lwemizobo yenkosi kunye nemizobo ngamanani kwi-HD. Ithuba elihle lokufunda ubuchule kunye nokupeyinta kwalo mzobi umangalisayo owakha wothusa kwaye wanyikimisa ibhodi yokupeyinta kunye nabaphuzi kunye nezojongilanga ezenze igalelo elinje.
Ukusuka kwiwebhusayithi yabo unako fumana amawaka emizobo kunye nemizobo Yenkosi enkulu yaseDatshi eyothusa abantu abakhethekileyo bexesha lakhe ngale mibala kunye nezinto awayezitshintshe ngokupheleleyo ukusuka kwindawo yokujonga engazange ivezwe ukuza kuthi ga ngoku.
Ngoku ukwazi ukufikelela kwimizobo yakhe emininzi kunye nemizobo iyasivumela Sondela kufundo lomsebenzi wakhe Phantse kwi-millimeter, kuba ngokusondeza sinokubona i-brushstrokes kunye nezo zinto zikhethekileyo. Kulabo bafunda ubuGcisa obuhle okanye bazifundise ngokwabo, ngumthombo ongapheliyo wobulumko kwicandelo lokupeyinta.
Siyakhumbula nendlela obuqili ngayo ubugcisa bakhe xa wayeqala yamkelwe kwilizwe elinenkcubeko Kwaye ukuza kuthi ga kulo mhla kwanemisebenzi yakhe emininzi iyaqhubeka nefuthe ngenxa yombala osetyenzisiweyo kunye neebrashi zokubetha ziphumelele, kwaye kwezinye iimeko zide zibe ndlongondlongo ukwenza ubume obukhethekileyo.
Unekhonkco kwiwebhusayithi yeVan Gogh Museum ukusuka kanye apha. Ithuba elingafani nelinye ukusondela kwenye yeenkosi zemizobo eqhubeka nokukhuthaza inkitha yabapeyinti kunye nemifanekiso kwihlabathi liphela. Kwiiveki nje ezidlulileyo sidibene nesindululo sokuyila Igumbi likaVan Gogh eArles.
Ukuba uyafuna fikelela kwimifanekiso yasimahla evela kwezinye iimyuziyam, yiza ngaphaya ngale linki kwiMyuziyam yaseMetropolitan yoBugcisa eNew York.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Imyuziyam yaseVan Gogh ipapasha uninzi lwemizobo yenkosi kunye nemizobo kwifomathi yedijithali ye-HD